कलंक 'जलवायु अस्वीकार' षडयन्त्र सिद्धान्तहरू, दक्षिणपन्थी राजनीति र पेटको भावनासँग जोडिएको छ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर विलुप्त विद्रोह, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	1 अक्टोबर 2019 मा	• 15 टिप्पणिहरु
'ग्लोबल वार्मिंग' कहानी एकदम ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको खेल हो जसमा दुबै राजनीति, मिडिया र प्रख्यात व्यक्तित्वले प्रमुख भूमिका खेल्छन्। यो अस्वीकार गर्न मिल्दैन कि मिडिया र राजनीतिले दक्षिणपन्थी राजनीतिक आन्दोलनलाई कलंक 'अस्वीकार' (अस्वीकार) र षड्यन्त्र सिद्धान्त समर्थकहरुसँग जोडेको छ। हामी यसलाई 'ब्रान्डि building निर्माण' वा 'ब्रान्डि call' भन्छौं। यो एक मार्केटिंग रणनीति हो जुन होशियारी र विश्वव्यापी रूपमा खेलेको छ।
दायाँ (अ :्ग्रेजी: 'दायाँ-वि wing्ग') समर्थनमा बढ्नको लागि अनुमति दिइयो र 'दायाँ-वि wing्ग' लाई केहि पुनरावर्ती कलंकहरूमा जोड्नु पर्‍यो। 'दाँया-वि wing्ग' समूह कलंकित छ: राष्ट्रवादी (विश्वव्यापीकरण विरोधी), महिला मित्रैलो, शpt्कास्पद, ग्लोबल वार्मिंग ("अस्वीकार") अस्वीकार र षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने। पछिल्लो विकल्प इन्फोवर्स (एलेक्स जोन्स), डेभिड आईके र नेदरल्याण्ड्समा थाइरी बाउडेट र रोबर्ट जेन्सेन जस्ता वैकल्पिक मिडियाको बृद्धिबाट हासिल भएको हो। ती वैकल्पिक मिडियालाई षड्यन्त्रकारी साइटहरूमा कलंकित गरिएको छ र उनीहरूलाई ट्रम्पको राष्ट्रवाद र विश्वव्यापीतावाद र ब्रेक्सिट प्रक्रियाको लागि खुला र कट्टर समर्थनको कारणले तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय दक्षिणपन्थी ब्रान्डको सावधानीपूर्वक निर्माण पूरा गर्नुभयो। केवल चीज तपाईंले अझै गर्नुपर्ने भनेको त्यो ब्रान्डलाई उडाएर, उदाहरणका लागि, आर्थिक संकट र तपाईं एक पटकमा त्यो ब्रान्डसँग सम्बन्धित सबै कुराको लागि तिर्नुहुन्छ।
ग्रेटा थुनबर्ग र सबै प्रकारका उत्सवहरूको माध्यमबाट जनसाधारणहरू अब सजीलो आंतको भावनामा खेल्दैछन्। प्रायः व्यक्तिहरू एकदमै अल्छी हुन्छन् वा तलका जस्तो प्रस्तुतीकरणहरू अध्ययन गर्न 'समूह विचार' मा व्यस्त हुन्छन्। "दुई घण्टा सम्म फिल्म हेर्नुहोस्? म त्यो गर्दिन। सबैले गन्ध लिन सक्दछन् कि वातावरण बर्बाद हुँदैछ र पृथ्वी तापिरहेको छ"। कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन कि वातावरण विनाश भइरहेको छ, उदाहरणका लागि, पानीमा प्लास्टिक, तर कलंक 'अस्वीकार' सबै कुरामा अडिग छ र जसले समस्या लिन्छ सबैले मुख्य धारा मिडियाले पूर्व-जाँच गरीएको आंकडा भन्दा पर जान्छ। यद्यपि धेरैले थाहा पाउँदैनन् (वा सजिलै बुझ्न सक्दैनन्) कि मिडियाले प्रचार प्रसार गर्न सक्दछ वा चीजहरू चलाउन संसारलाई आर्थिक झण्डा (आम मानिस) र विश्वव्यापी प्रशासनिक प्रणालीतर्फ डो lead्याउन सक्छ। ।
राजनीतिले कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाले राजनीतिलाई मुख्य रूपमा ठूला उद्योगहरूको लगानीबाट आर्थिक सहयोग गर्ने तथ्यलाई वेवास्ता गर्दछ। उद्योगहरू जुन हाम्रो महासागरहरूमा ती सबै प्लास्टिकहरूको आविष्कारक र उत्पादक हुन्, उदाहरणका लागि। यद्यपि हामीले चीजहरू भ्रमित गर्नु हुँदैन। थप करहरूको विश्वव्यापी परिचयमा फोकस वातावरण र ग्लोबल वार्मिंगमा CO2 मा आधारित छ। यस्तो देखिन्छ कि जनसंख्यामा अझ बढी नियन्त्रण र नियन्त्रण प्रदान गर्ने समाधानको माध्यमबाट धक्का दिन विश्वव्यापी समस्या प्रचार गरिएको छ। त्यो लुकेको अन्त गोल जस्तो देखिन्छ।
सबै कुरा पछि, सुधार त मात्र हुन सक्छ जब चीजहरू खराब हुँदै जान्छन्। संज्ञानात्मक असन्तुष्टि तब हुन्छ जब तपाईंले मानिसहरूलाई औंल्याउनु हुन्छ कि हामीले पहिले नै मौसम बिग्रँदो छ कि छैन भनेर जान्नु पर्छ। व्यक्तिहरू त्यस विश्वास प्रणालीमा पहिले नै अडिसकेका छन्। यो एक प्रकारको 'समूह विचार' वा यसलाई अध्ययन गर्न समस्या लिनसमेत अस्वीकार गर्दछ। एकचोटि स्वीकृत भएपछि, यसलाई तोड्न गाह्रो छ। यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई तलको जस्तो एक प्रस्तुती ध्यानपूर्वक हेर्नबाट रोक्दछ। हामी शर्त लगाउँछौं कि यदि तपाईंले यो लेख साथीहरूलाई पठाउनु भयो भने उनीहरूले प्रस्तुतीकरण हेर्न अस्वीकार गर्नेछन् र तपाईंको काँधमा सारिनेछन् र तपाईंलाई "जलवायु अस्वीकार" वा "षडयन्त्र चिन्तक" भन्ने गर्छन्? विगतमा जुन तपाईंले चर्चमा देख्नुभयो त्यससँग तुलना गर्न सकिन्छ। मानिसहरूले भर्खर पास्टरले भनेका कुरा ग्रहण गरे, किनकि उनले यसका लागि अध्ययन गरेका थिए। सुविधा व्यक्ति र तिनीहरूको विश्वास प्रणाली को सेवा गर्दछ। जो कोही त्यस्तो विश्वास प्रणालीबाट विचलित हुन्छन् त्यहि चर्चले बोलेको कलंकको उपहास गर्दछ। (प्रस्तुतीकरण हेर्नुहोस् र भिडियो अन्तर्गत थप पढ्नुहोस्)।
ती व्यक्तिहरूले सायद माथिको प्रस्तुति कहिल्यै देख्दैनन्। यसले उनीहरूले अपनाएको विश्वास प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ र तपाई त्यो चाहनुहुन्न। मनोविज्ञानमा, त्यो घटनालाई "संज्ञानात्मक असन्तुष्टि" भनिन्छ। यस बीचमा, त्यो विश्वास प्रणाली Greta Thunberg को माध्यम बाट पछिल्लो भावनात्मक खेल द्वारा प्रबल गरिएको छ। ती युवती जो कुनै ठोस तर्कको साथ आउँदैनन्, तर उनीहरूले पेटको भावनाको आधारमा श्रोताको भावना खेल्छन् (किनकि ती तथ्यहरू होइनन्) कि मौसम यस्तो तापक्रम भइरहेको छ कि जनावरहरूको प्रजातिहरू मर्दै गइरहेका छन् र युवाको भविष्यको भविष्य नै छैन। यो नम्बर डेनिप्ट गर्न पनि धेरै सजिलो छ, जस्तै डेभिड आईके ईन यो प्रस्तुति राम्ररी वर्णन गर्दछ। तर वर्तमानले 'जलवायु परिवर्तन' को आफ्नो विश्वास प्रणाली अपनाएको छ कि छैन र छैन कि जस्तो प्रस्तुतिहरु मा हेर्ने छैन। तपाईं ती मूर्ख तथ्या by्कहरू द्वारा भ्रमित हुन चाहनुहुन्न, तर भावनालाई समात्नुहोस् कि केहि परिवर्तन हुनुपर्दछ। यदि ती नै व्यक्तिहरू, 10 वर्ष पछि, परिवर्तन देखिएको छैन, तर प्रति वर्ष खर्च गर्न हजारौं यूरो छ र धेरै स्वतन्त्रताहरू लगिएको छ, तब सायद यो साकारता अगाडि आउँनेछ, तर त्यसो भए ढिलो हुनेछ।
वास्तवमै भावनात्मक खेल छ भन्ने तथ्यले ती व्यक्तिहरूलाई कुनै फरक पार्दैन जो उनीहरूको 'ग्लोबल वार्मिंग' वा 'जलवायु परिवर्तन' विश्वास प्रणालीमा संलग्न छन्। होइन भने पनि तपाईंले सर डेभिड एटनबरो र उनको फिल्म निर्माता टोलीले नेटफ्लिक्स दस्तावेजी श्रृंखला 'अवर प्लानेट' मा स्पष्ट छल र छल प्रयोग गर्नुभयो। यदि त्यो शृ .्खलाबाट 1 झूटा पर्दाफास भयो भने, तपाईं अचम्म लाग्न सक्नुहुन्छ कि यथार्थताको झूटा तस्वीर दिनको लागि कति सँगै फिलिम गरिएको छ। जे भए पनि, यो स्पष्ट छ कि हराएको ध्रुवीय बरफको परिणाम स्वरूप वाल्रुसेसको चट्टानमा डुबेको कथा स्पष्ट झूट थियो। यदि तपाइँले "लेख जलवायु परिवर्तनकर्ता" वा "षडयन्त्र चिन्तक" भन्ने मानिसहरूलाई यो लेख फर्वार्ड गर्नुभयो भने, तिनीहरू फेरि हान्नेछन् वा एटेनबरो र नेटफ्लिक्सले पछि अस्पष्ट बहानालाई उद्धृत गर्न सक्दछन्। 'तथ्यलाई जाँच्ने' को गतिविधि यस्तो कतै कलंकित हुन्छ कि मध्यम-बुढाई महिलाहरू मात्रै, मित्रैलो, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रवादी, षडयन्त्रवादी पुरुषहरूले कष्ट दिँदैनन्। wil लिनुहोस्। यसबाहेक, तथ्य जाँच अब मिडिया र फेसबुक विज्ञ द्वारा गरिन्छ कि केहि हो। कसाई जसले आफ्नै मासुको निरीक्षण गर्दछ। समान मिडिया द्वारा प्रोग्रामिले उत्कृष्ट कार्य गरेको छ!
यो अब तथ्यांकको बारेमा छैन, तर प्रोपेगदानको माध्यमबाट मिथ्याको बारेमा, प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रयोग गरेर जसले फेरि पेटको भावनाहरूमा खेल्दछन्। उसको चलचित्र क्यारियरको हैरिसन फोर्डको छवि अब भरपर्दो खेल खेल्न प्रयोग भइरहेको छ। उहाँ भर्खर अमेजन अमेरीकाको प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुभयो नयाँ इमो बूस्टरको रूपमा उसले आफुलाई नलेखेको थियो। अवश्य पनि एक कलाकार भावनाहरू खेल्न सक्छन्! उहाँ यसको लागि एक अभिनेता हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि अमेजन अमेरीकन CO2 को अवशोषणको लागि महत्त्वपूर्ण छ (तर अधिक CO2 ले अमेजनलाई बढाउँदछ), यसको जैव-विविधता र हामीले सास फेर्ने हावाको लागि। ह्यारिसन फोर्डले हामीलाई त्यो बताउनुपर्दैन। फोर्डले जे भन्छ सबै अरू केही होइन, छविलाई दर्शकहरूको न्यूरो भाषिक प्रोग्रामिंग बाहेक "पहिले भन्दा धेरै ' जलिरहेको छ फोर्ड चाहन्छ कि तपाईलाई कस्तो लाग्छ तपाईको घरको कोठामा आगो लागेको छ र उसले श्रोतालाई भावनात्मक हिसाबले खेल्छ। उसले छवि चित्रण गर्‍यो कि हाम्रो सम्पूर्ण घर आगोमा 'पृथ्वी' छ र 1 12 हो। जे होस्, यदि तपाइँ यस लेखको एकदम तल भिडियोमा पढ्नुभयो र हेर्नुभयो भने, तपाइँले फेला पार्नुहुनेछ कि जनसमूह फेरि प्रचारवादी मिडिया मार्फत वास्तविकताको गलत छविसँग खेलेको छ। बच्चाको रूपमा हामीलाई थाहा छ कि सिन्टर्क्लास कुनै खास समयमा अवस्थित छैन, तर हामी अझै पनि उत्सव मनाउन चाहन्छौं।
उनले यसो भनेनन कि अमेजनको बारेमा ह्यारिसन फोर्डको भाषण 'दायाँ-पखेटा' लाई ब्ल्याक गर्न को लागी अर्को प्रयास हो जुन वास्तवमा झूटा दाबीहरूमा आधारित छ। यो आलोचनात्मक सोचलाई कुनै त्यस्तो चीजसँग जोड्ने कुरा हो जुन स्पष्ट रूपमा कलंकित ब्रान्डसँग सम्बन्धित छ (जुन चाँडै नै संकटको साथ उडाइनेछ, ताकि तिनीहरू दोषी हुन्)। फोर्ड एक अभिनेता हो र अभिनेताहरूलाई उनीहरूको भूमिकाको लागि भाडामा र भुक्तानी गरिन्छ।
विगतका वर्ष भन्दा अमेजनले 2019 मा कुनै अधिक आगो थाहा पाइसकेका छैनन् र प्रयोग भिजुअल सामग्रीको मिति तोकिएको छ। तर प्रश्न यो हो कि यदि तपाइँ यस भिडियोमा क्लिक गर्न फेरि समस्या लिन चाहानुहुन्छ वा तपाईं केवल कलंकमा पछाडि फर्कनुभयो भने।खैर, त्यो अर्को षडयन्त्र सिद्धान्त हुनुपर्दछ"। संक्षेपमा: प्रश्न यो हो कि यदि तपाईं उदात्त प्रोग्रामिंगको शिकार हुनुभयो (जसलाई 'प्रचार' पनि भनिन्छ) र तपाईं गलत दावीहरूको अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईं आफैलाई त्यो प्रश्न सोध्ने आँट गर्नुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो विश्वास प्रणालीमा टाँसिनुहुन्छ? तपाईं समाजमा निश्चित रूपमा निर्मित ध्रुवीकरणको अंश बन्नुभएको छ र त्यो ध्रुवीकरणले जहिले पनि हाल उत्पन्न गर्दछ (ब्याट्रीको प्लस र माइनस पोलको रूपमा)। तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन दिशामा उर्जा बगिरहेको छ। सुझाव: ह्यारिसन फोर्ड 'विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा' वक्ता मध्ये एक थिए। हामी एक उमेर पुरानो मैक्सिमको साक्षी छौं: विभाजन र नियम।
ट्याग: लाई, परिवर्तन अस्वीकार, वातावरण, साजिश, साजिश विचारकर्ता, अस्वीकार, विशेष, जोडिएको, वैश्विक, Harisson फोर्ड, वातावरण, मौसम परिवर्तन, अस्वीकार, अस्वीकार, राजनीति, दायाँ, दायाँ-पखेटा, वर्तमान, तापक्रम
1 अक्टोबर 2019 मा 13: 46
यो समय यस्तो छ कि यस किसिमको क्लब वा रोम साइप्सको सट्टामा ठूला खतराहरूका बारे कुरा गर्ने। के हामीले तुरून्तै बुझ्दैनौं हुनसक्छ त्यो मानिस र प्रकृतिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। यदि हामीले तुरुन्त कार्य गरेनौं भने एक पारिस्थितिक प्रकोपले हाम्रो पर्खाइमा छ।
1 अक्टोबर 2019 मा 16: 48
यसले आंशिक रूपमा इ England्ल्याण्डमा जनसंख्या घट्ने बारेमा वर्णन गर्दछ
1 अक्टोबर 2019 मा 17: 03
धेरै नराम्रो तपाई विषयमा नहुनु भयो
के यो समय हो जब हामी वास्तविक खतराको बारेमा कुरा गर्छौं? तपाईले भनेको जस्तो विश्वास गर्नुहोस् कि हीर भ्रिजल्याण्डको लेख लेख यस समयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखहरू मध्ये एक हो, तर त्यो पन्छी।
यदि तपाइँ तपाइँको साइट को माध्यम बाट केहि अधिक जान्नुहोस्, लेखकले वास्तवमै 5G का बेफाइदाहरूबारे छलफल गरेको छ, यो लिंक हेर्नुहोस्, हुनसक्छ तपाइँले यसलाई मिस गर्नुभयो मिस (पूर्व :) तपाईं यहाँ फेरि गर्न सक्नुहुन्छ:
1 अक्टोबर 2019 मा 17: 53
पोर्भा के हो ?! यो शीर्षमा छ किनभने जादुगरले भीडलाई मौसम मुद्दाहरूका साथ विचलित गर्दछ जबकि उही इकोलोजी फ्रिक्वेन्सी हतियारहरूले ग्रस्त छ। यो लेख को हानि को लागी केहि छैन ..
1 अक्टोबर 2019 मा 18: 12
यसले जहिले पनि मानिसहरूलाई अर्को बिषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न काम गर्दछ, ताकि दिमागले चाँडै यसको महत्व बिर्सन्छ।
मानवता कसरी खेल्दछ भनेर हेर्न आवश्यक छ।
1 अक्टोबर 2019 मा 19: 41
povrh एक अघिल्लो कमेन्टकर्ता थियो, लाग्यो कि तपाई हुनुहुन्छ, त्यसो होईन, त्यसैले प्रासंगिक छैन।
हीर भ्रिजल्याण्डबाट माथिको लेख हालका घटनाहरूका लागि प्रासंगिक छ, किनकि यसले हामी कहाँ चालित भइरहेको ठ्याक्कै रूपरेखा बनाउँछ, यो एक मेगा चेतावनी हो।
र अवश्य पनि तपाईका पक्षहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् तर केवल शक्तिका उपकरणहरू जुन त्यो हो
प्रचार (पनि धेरै महत्त्वपूर्ण)
1 अक्टोबर 2019 मा 20: 34
ठिक छ यो सायद याद छैन, किनकि दिमाग नियन्त्रण दिन बृद्धि हुँदैछ र हाम्रो दिमाग पहिल्यै बादलमा हुनेछ ...
र 5G र एलोन कस्तूरा मस्तिष्क-कम्प्युटर ईन्टरफेसले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
1 अक्टोबर 2019 मा 13: 59
यसै बीचमा, ती सबै विद्यार्थीहरू 4G / 5G मोबाइल सेल्फीहरू चल्दैछन्
1 अक्टोबर 2019 मा 18: 49
सुनामी जस्तै, सन्देश लगातार सबैको लागि आउँदैछ,
संयुक्त राष्ट्र संघ, घस्रन्छ, थिईन्छ र यसलाई तपाईंको घाँटी तल धकेल्छ।
फेरि आज 1 अक्टूबर पछि घृणित Greta (बाल दुर्व्यवहार) संयुक्त राष्ट्र संघको समयमा देखा पर्दछ
(र पक्कै पनि दशकौं देखि मौसम हेरफेर गरिएको छ, कि यो पनि एक तथ्य हो)
1 अक्टोबर 2019 मा 19: 32
प्रचार दोहोरिन जारी गर्नु पर्छ।
लेखमा प्रस्तुतीकरणले देखाउँदछ कि कसरी आईपीसीसी डाटा को उपयोग गर्दछ।
केवल धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई हेर्न समस्या लिने गर्दैनन्।
हामीसँग अधिकतम 8 सेकेन्डको ध्यान अवधि छ
4 अक्टोबर 2019 मा 05: 37
शानदार !!! हामी बच्चाहरु खाने छन् जाडो बचाउन को लागी!
केटी: “केही महिनामा आकाश पस्दै छ। हामीले बच्चाहरू खानुपर्दछ। "
एओसी: "हो, होइन, त्यसो भए ठीक छ। तर हामीसँग केहि महिना भन्दा बढी छ। "
4 अक्टोबर 2019 मा 20: 49
अर्को विश्वव्यापी एकता लाई बढावा दिने राम्रो अभिनेताले र भाषणको अन्त्यमा पिरामिड इशारा लुसिफरियन लिपिलाई प्रकट गर्दछ।
कसैले पनि प्रदूषण चाहँदैन। सबै जना स्वस्थ ग्रह चाहन्छन्, तर अपराधीहरू कर्पोरेसनको शीर्षमा छन् र जनताले तिर्नु पर्छ। धेरै प्रदूषण छविहरू केवल फिल्म निर्माण हो। यो सबै समस्या, प्रतिक्रिया, समाधानको बारेमा हो।
8 अक्टोबर 2019 मा 12: 42
मलाई लाग्छ कि विश्वव्यापी जलवायु गुट एक डायबोलिकल संगठन हो। विभिन्न समूहका वैज्ञानिकहरू, त्यसकारण जसले ठूला बथानको मौसम धर्मलाई पछ्याउँदैनन्, उनीहरूलाई केवल धम्की दिइन्छ ...
तपाइँ कत्ति बिरामी चाहानुहुन्छ कि त्यो तापक्रम जलवायु गुट संग ...!
दि ग्रेट ग्लोबल वार्मिंग स्विन्डल [एनएल सब्सक्रा]
8 अक्टोबर 2019 मा 13: 28
त्यहाँ वैज्ञानिकहरू छन् जसले प्रवाहको बिरूद्ध जान्छन् र स indicate्केत गर्दछन् कि 2020 बाट विश्व तातो हुने छैन तर पर्याप्त शीतल हुनेछ।
हामी एक मिनी हिउँ युगको अपेक्षा गर्दैछौं ...
नासाले पनि पृथ्वीको कूल चिसोको भविष्यवाणी गर्दछ।
प्रकृति, शक्तिशाली सूर्य पछाडि हिर्काउँछ र आईपीसीसी को झूटहरु पृथ्वीको कडा चिसो द्वारा आउँदै गरेको नष्ट गर्दछ .... महान!
पूर्ण रूपमा मूर्ख नबनाउन, आईपीसीसी अब तिनीहरूको रिपोर्टमा सानो तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेर गोप्य छ।
"आईपीसीसी को लागी Heibel"
8 अक्टोबर 2019 मा 15: 26
चक्रहरू सबै समयका हुन्छन् र जताततै प्रकृति र आर्थिक मोडेलहरूमा देखा पर्दछ, पृथ्वीमा तापक्रमको उतार चढाव सौर गतिविधि (सूर्य स्थान सूचकांक) सँगसँगै आउँछ। जानुहोस् र औसत हिस्टरिक जलवायुको व्याख्या गर्नुहोस्। हामी वास्तवमै एउटा तथाकथित डाल्टन न्यूनतम (2020) माउन्डर न्यूनतम (सानो बरफको उमेर) को नजिक आइपुगेका छौं, यो 18 शताब्दीमा पहिले पनि भएको थियो। त्यो ढाँचा एक प्राकृतिक चक्र व्यवहार गर्नुपर्छ को रूप मा आफूलाई दोहोर्‍याउँछ। अवश्य पनि तपाइँ यसलाई मोडलहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन अब रोम एडिप्ट्सको क्लबले प्रयोग गरेको छ, जुन एक्सएनयूएमएक्स भन्दा बढि पछाडि हुँदैन।
विश्वव्यापी जलवायु कर र जनसंख्या घटाउनुको पछाडि गोप्य एजेन्डा छ।
« Greta Thunberg 'आलोचक लि gender्ग-प्रतिक्रियावादी नैतिक रूपमा दिवालिया बाल-मित्रैलो कायरहरू हुन्': कारणको अन्त
ब्रान्ड 'सही' र कलंकको सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध मार्केटिंग रणनीति »
कुल भ्रमण: 254.092
मार्टिन भिजल्याण्ड op २२ हप्ताको परीक्षणमा के हो र के यो बच्चाको लि gender्ग परिवर्तन गर्न साँच्चै सम्भव छ?
SandinG op २२ हप्ताको परीक्षणमा के हो र के यो बच्चाको लि gender्ग परिवर्तन गर्न साँच्चै सम्भव छ?
AnOpen op राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम: "२२ - हप्ताको टेस्ट लिनुहोस्!" .. तपाईंको बच्चालाई हर्माफ्रोडाइट बनाइनेछ